Chii chinonzi Aura? Ndeupi rudzi rwechisimba chine pandiri? - Kunamata
iphone 6s Notices dzisiri kushanda
mitsara pa iphone 6 skrini mushure mekudonha
vakadzi vane nhumbu vanogona kunwa eggnog
kumuka kuma 2am munhu akatarisa kwauri
Chii chinonzi Aura? - Ndeupi rudzi rwekuchinja kune ini?
What Is An Aura What Kind Influence Have Myself
Ne kutanga kwezana rino, uko kuri kutove kuwirirana zvakanaka kusvika mukota yekutanga, vanhu vari kuwedzera kuziva kuti kune zvakawanda zvakawanda pakati pedenga nenyika , iyo kune vakawanda isingazivikanwe ndima. Nharaunda yako pachako yakakosha uye, muchokwadi, yakakosha zvakanyanya kuchengetedza zvakanaka. Hupenyu hwako uye hutano, hwepamoyo uye hwepfungwa hutano zvakabatana zvakananga neizvi.
Izvi ndezve Aura. Chikamu chakakurukurwa kwazvo chinosanganisira muviri wako wenyama zvakare. Kunakidzwa iwe semunhu ane pfungwa dzakavhurika. Kana iwe uchida kutarisa kumberi kupfuura iyo pfungwa ye'icho chaicho 'inounza iwe kusvika zvino, zvirokwazvo zvakakosha kuti utungamirirwe nekuda kuziva.
Zvichaunzwa nechinyorwa chino:
Chii chinonzi aura?
Rudzii rwekurudziro iyo aura ine pandiri?
Kuverenga kweaura kunoshanda sei?
Kana iwe ukazvipa iwe pachako mukana we gadzirisazve kugashira kwako , iwe unotanga kuona nyika uye iwe pachako zvakasiyana zvakanyanya. Izvi zvinodaro nekuti kutarisisa kwako kuri kuchinja. Kune zviitiko zvaimboita sezvisingakoshi, unovhura maziso ako zvekare. Iko kune kwakanyanya kutariswa kwekuzorora uye kuzorora uye iwe unokwanisa kuzviita famba zvirinani mupfungwa yenguva nenzvimbo . Mukana wacho hausi kusarudzika kuti unoufarira zvakanyanya uye unoita sarudzo yekuramba uchifamba mune izvi kudedera nesimba.
Mabasa akadai seYoga, Tai Chi uye Kufungisisa anokupa iwe kuvhura kuti ugare zvechokwadi kune 'inononoka kufamba'. Iyo inofadza mhedzisiro mhedzisiro yeiyi ndeyekuti iwe unowana zvimwe uye kubatana zvakanyanya nemuviri wako uye kuti musoro wako unodzikama.
Uyezve, paunotarisa pane yako yakakura nhengo, ganda rako, uye nekuvhara maziso ako paunenge uchizorora zvishoma nezvishoma, unongoerekana waona kudziya kwakasangana pamaoko ako uye kumeso uye unonzwa aura yako, munda wesimba wesimba wakakomberedza munhu wese mupenyu.
Pamwe musoro wako unoshandura izvi kuita kupisa kwemuviri uye zvechokwadi hapana chakaipa nazvo. Asi kana iwe ukaramba uchidzidzira, mweya wako unozonyatso kukubatsira iwe kuona iyo kudengenyeka yeinoshamisa uye panguva imwe chete inoshamisa uye ine simba simba munda izere neruzivo. Iwe unoziva unosangana neako aura.Wako wega uye echisimba simba system uye unodzivirira yakatenderedza muviri wako wenyama. Iwe unonzwisisa kuti izvi zvinoda nguva, moyo murefu uye mari. Nekudaro, iko kukodzera kwauchazowana kubva pane izvi kwakakosha.
Kana iwe wakazvarwa uine basa kwete yekunyatsovhara yako yakasikwa aura uye ine simba system paunenge uchikura kusvika pakuva munhu mukuru uye zvese zvakaitika panguva yekurerwa kwako, unowira pasi pechikamu aurareader - wepakati - paragnost uye imwe chic izwi iri ‘Masimba asinganzwisisiki’ . Hunhu hwako uye kuzvipira sewemushandi wezvemagariro zvobva zvabatana zvakasununguka neako clairvoyance, clairvoyance uye kujekesa kuziva. Kana iwe uri murairidzi, psychotherapist uye mudzidzisi kana pamwe iwe uchishanda zvine mutsigo mune zvehutano, saka iwe zvechokwadi une hurongwa hwakasimukira uye hwakasikwa, iyo inonziwo 'kunzwira tsitsi-kunzwira kugona'. Padanho risingazive, yako aura inoshanda yakanyanya kupinza uye inonzwisisa newe. Mubvunzo chete ndewekuti iwe unonyatso cherekedza ruzivo rwese here.
Wese munhu uye hupenyu hwese huri mune ino cosmos uye zvakasikwa zvakakomberedzwa neaura uye munhu wese anogona kuzvinzwa uye kuzviona. Iko hakuna chinhu hokuspokus nezve apa uye haufanire kuvhenekerwa izvi zvakare. Iyo aura ndeye yakasarudzika yehupenyu uye zvakasikwa system uye kana ukasarudza kudzidza kuona nekuinzwa zvakare, iwe unotora nzira yakakosha yekubatanidzazve nayo hunhu hwako uye hunhu hwako 'hwekuve' . Nenzira iyi iwe uchave zvakare unozivana nezvakakosha uye zvakadzama zvinoreva hupenyu uye iwe pachako. Izvi zvinonyatso kubhadhara.
Kuti masimba eminda mune zvakasikwa anoita basa rakanakisa anogona kuwanikwa, semuenzaniso, mune amai zvakasikwa. Iyo nyika yemhuka inoshandisa nekuonga kwemaoko anogara achifamba-masimba masimba eaura masikati neusiku . Zvine musoro chaizvo, nekuti ndizvo chaizvo zvinoreva nzira dzekutaurirana, idzo dzakanyanya kusanzwisisika uye dzakanatswa, kuti ruzivo rwese rwuripo muminda yesimba runotorwa. Nyika yemhuka inoshandisa izvi magetsi emagetsi kukwanisa kuongorora. Mhuka inofanira kurarama inogara yakangwarira uye, semuenzaniso, inogara iri mu 'ikozvino'. Nekuda kweizvi muviri kuziva uye kwete ese epanyama sensu chete, asiwo iwo e-ultra-sensitive chiteshi anoshandiswa.
Kune zvakawanda zvetsika dzekare nezvitendero zvinotaura nezvazvo rukoko rwechiedza chakakomberedza vanhu, mhuka uye neumambo hwezvirimwa . Amai Pasi vakakomberedzwa nerunako uye runopenya halo uye izvi zvakaparidzwa zviuru zvemakore apfuura nechiHindu, chiBuddha, chiJainism uye, semuenzaniso, chiSikh. Chiedza chitsvene iyo iripo kutenderedza muviri kana wakakomba muviri. Muviri wesimba uyu waisaonekwa kune ziso risiri remweya, sezvakange zvatoziviswa kare.
Zvinonakidza kuziva kuti mureza weBuddhist wemavara wakagadzirwa kuburikidza neye aura yekufungisisa Buddha . Kana iwe ukaenda kune tsika dzechiKristu uye woongorora mifananidzo, semuenzaniso, Jesu naMaria vanoratidzwawo vaine mwenje wendarama uye a halo yechiedza yakatenderedza misoro yavo .
Pamberi pehafu yekutanga yezana ramakore re19th, zviitiko zvitsva zvemuviri zvakawanikwa panguva iyoyo, maererano nesainzi. Maererano nefizikiki yaIsaac Newton - wezvechitendero, wezvemuchadenga, wezvesaenzi - izvi zvaisakwanisa kutsanangurwa. Zvakawanikwa panguva yekuferefetwa kwemagetsi emagetsi zvakadaidzwa munda, yekutanga sainzi kuwanikwa kweiyo aura.
Anopfuura makore zana apfuura, Albert Einstein akaburitsa yake yakakosha dzidziso yehukama, iyo yakabvisa zvinoitika zvaNewton uye yakachinja iyo pfungwa yenguva zvachose . Zvinoenderana nedzidziso yaEinstein, munda kana huremu hauna mativi matatu uye pfungwa yedu yenguva inoenderana. Ose ari maviri akabatana kune mumwe nemumwe uye pamwe chete anoumba hune-mativi kubatana. Saka iwe haugone kutaura nezve nzvimbo pasina kubatanidza pfungwa yedu ye 'nguva'.
Wese munhu anotarisana nemaonero maviri 'munda' uye 'nguva' zvakasiyana nekuti iyo 'munda' haizive nguva uye kune akasiyana maimhanyisa. Izvi zvinoreva, semuenzaniso, kuti panguva yekuverenga aura, chiitiko chinogona kuitika, kana kuti chakatoitika.
Dr. Robert Becker - Medical Chikoro muSirakuse, New York - yakazoguma yakanyorwa muna 1979 kuti kune munda wesimba wakabatana nemuviri wako uye neyepakati tsinga system . Iyi ndima, inonzi bioplasmic kana ectoplasm - kunze kweplasma - inoshandura chimiro uye kusimba kana shanduko yemuviri neyepfungwa zvikaitika.
Iyo Aura sechiitiko chako pachako pasi peLoupe
Kuti pane chimwe chinhu muhunhu hwako chaunotaurirana nacho kunze kwe 'njere dzako dzakajairika' zvinoonekwa kubva pakudengenyeka kwaunosangana nako mukukurukurirana kunonakidza kana kusingafadzi, goosebumps pamaoko ako kana kunzwa kusingafadzi mudumbu rako - solar plexus, solar plexus chakra.Kuti iyo simba rine simba minda yako aura ita basa ravo uye kuti unocherekedza izvi, zvinotanga nezviitiko zvakakosha kana, semuenzaniso, ukasangana nemumwe munhu mauri ziva kuti unofarira mumwe munhu here kana kuti kwete . Iwe unogona zvakare kuve nekunzwa kuti chimwe chinhu chichaitika. Sezvaunotarisa zvakanyanya pane izvi, watanga kushandisa yako yakasikwa intuition,pfungwa yako yechitanhatuyakabatana neako aura.
Yazvino sainzi inzira yakanakisa yekunzwisisa zvirinani kuvandudzwa kweye clairvoyance yako, yako intuition uye kushandiswa kweako aura. Izvi zvatotidzidzisa zvakawanda pamusoro pesimba remasimba masimba. Iwo masayendisiti zvidzidzo kusvika parinhasi - kusvika paya zvaakagadzirwa - ari kufamba pa kumhanya kwemheni mune ino nguva yeAcarius uye utitaurire kuti senhengo yemunhu hausi chete chimiro chemuviri chakaumbwa nemamorekuru, asi kuti iwe zvakare unoumbwa neminda yesimba .
Iwe saka unopinda nyika yemhando mafomu - mafomu akasarudzika - pamwe nenyika yesimba minda . Iyi fananidzo yegungwa pasi pekukomba kweMwedzi nemafungu eEbb neMafashama.Neiyi nzira iwe pachako unoyererawo mukuchinja kunogara kuripo. Unogona kuona yako aura sechinhu chakaita semafuta, chakavakwa kuburikidza nechinhu chisina kujeka.
Masayendisiti ave kudzidza kuyera kuwanda kwezvinhu izvi zvakanatswa kwazvo. Zvakaitika izvozvi musainzi zvakatidzidzisa kusvika zvino iwe unogara munyika ine masimba ekurarama minda ayo ari kugara achisangana nemumwe uye achitaurirana nemumwe uye ichi chiitiko chinonakidza. Pane zvakawanda zvekubuda mune yako flubber-senge aura. Izvi zvakazara neruzivo rwakakosha. Neraki, kushandisa nekuwedzera kunoitwa kweizvi kuburikidza, pakati pezvimwe zvinhu;
Aura kuverenga - kuverenga yako aura
Aura kuporesa - kuisa iko kuzviporesa kugona kwemuviri wako kuti ushande
Aura kuchenesa - kuchenesa uye kuchenesa nzvimbo yako tsvene
Aura kurapa - kushandura uye kuporesa kurwadziwa kwepfungwa, kwepamoyo uye kwemuviri
Sezvineiwo, makosi aya ave kutopihwa kuburikidza nekubvumidzwa, akajairwa masosi ekudzidzisa uye kune akawanda uye mazhinji masangano ekuchengetedza ayo akavhurika kune akazara mushonga - muviri, mweya nepfungwa.
Sezvaunofamba uchidzika mukati mepasi rezvemazuva ano psychology pamwe chete nekumuka pamweya, iwe uchaonawo izvozvo izvo zvaunoda kugadzirisa padanho rako pachako fomu rekare rinonyungudika - mumunda wekuziva . Iko hakuna chakanaka kana chakaipa, sekungovenga uye rudo. Iwe unowana ichiwedzera uye yakawanda nzvimbo mukati mako, iyo isina fomu uye inogona kukura isingaperi. Saka pane chimiro, asi zvakare kwete .
Izvo zvakanaka kwazvo kuziva kuti iwe unogara munyika yepfungwa minda uye bioplasmic - ethereal, isinganzwisisike uye isingafi - mafomu. Izvi zvinopfuura nepamusoro pemuviri wako. Saka iwe uri chaiko chinozunguzika uye chinopenya bioplasm .
Zvinyorwa zvawakaverenga pamusoro penyaya iyi zvave zvichitaura zvakafanana zvakafanana kwemakore . Hachisi chinhu chitsva. Kubva pane ruzivo rwese rwunogona kuwanikwa nezve iyo aura munguva dzekare, yatove yakanyorwa nezvesimba uye zvidimbu kubva kubioplasm, uko kwakavakirwa aura yako. Munguva dzese dzemazuva edu ekuziva, irwo ruzivo irwo rwuri kuvhurwa uye zvinongokubatsira iwe kuti uve unoziva pamweya zvakare uye kukura pamweya. Mune mamwe mazwi, kudzoka kumba zvakare mune zvako zvakasikwa mamiriro.
Yako aura uye hutano
Iwe ikozvino unoziva nezve chokwadi chekuti yako aura yakabatana yakanangana nepakati pesisitimu yako yetsinga. Iyi simba remagetsi saka rakabatana zvakananga kune hutano hwako uye izvi zvinowanzo kanganwika. Iwe unoziva kuti zvakakosha kutevedzera mararamiro ane hutano.Mune ino mararamiro ane hutano, pakati pezvimwe zvinhu, kudya uye kurovedza muviri ndiyo mbiru yekutungamira hupenyu hune hutano uye hwakakosha. Kana iwe ukazvipa simba zvakare zuva rega rega neakakodzera 'mafuta', izvi zvinonzwa zvakanaka uye iwe uchaona izvi pane chikamu chemuviri, semuenzaniso nekurema kwako.
Kutora zvakanyanya Kuchengetwa kwakanaka uye kune hutano simba rakaringana uye ine hutano, yakachena uye yakakosha aura yakakosha zvakanyanya . Iwe unozvidza simba rako rechisikigo, simba remuviri wako rinova shoma, kuramba kwako kunova kushoma, kusagadzikana kwako kwepfungwa-kwepfungwa kunouya pasi pekumanikidzwa, pamwe nemhedzisiro yacho. Sezvo anthroposophy inoti: muviri-mweya-pfungwa seutatu , saka zviri chaizvo.
Neraki, pane inonakidza uye inoshamisa mikana yekuchengetedza yako aura nenzira yakanaka, senge:
Inwa mvura yakawanda - uchishambidza iyo aura uye muviri wenyama uye kugadzika
Kushambira - kupukuta nekudzika
Kudya kwakachena uye zvinowedzera
Aura Soma - masimba anotsigira ekurapa kwemavara
Bach maruva kurapwa
Chakra kurapa uye kuchenesa
Kufungisisa uye kuona
Zvisikwa uye kufamba kwegungwa - mvura yemunyu
Schussler Cell munyu
Yako aura senzvimbo yako tsvene
Unogona kuona yako aura as nzvimbo yenyu tsvene uye iwe sarudza uyo anobvumidza iwe munzvimbo ino. Unogona kunge usati uchiziva nezvazvo, asi zvese zvinoenderana neyako yekuita sarudzo module nezve mamiriro akakwirira eara yako. Pese paunoyambuka muganho wako uye uchinyatsoda kuti kwete, mumwe munhu kana mamiriro ezvinhu anoitika muaura yako uyezve nenzvimbo yako . Izvo zvakakosha kuti uzive izvi neese sarudzo yaunoita. Nguva dzese dzaunofunga kutora 'nzvimbo' yako wega nekuti iwe unonzwa kuti izvi zvakanaka, kana kuti kuziva kwako kwemukati kunoratidza izvi kwauri, yako aura inosara dzikama uye zvine mwero uye iwe unoonawo kuti iwe semunhu wakasununguka mauri. ganda .
Chimwe chekuratidzwa kwakasarudzika kweKusika uye simba repasirese isimba rako revanhu uye izvi zvine chekuita nehupenyu hwako hwevanhu. Yako aura muviri unovhenekera, unodzivirira uye unopinda mumuviri wako wenyama. Yako aura chikamu chechadenga uye simba repasirese zvakare.
Zvinotaridza kuti yako aura zvakare yakaumbwa nematanho akasiyana .Izvi zvinodaidzwa zvakare kunzi miviri miviri uye zvese zvinotaurirana pamwero wazvo kubva kune zvakanakisa zvinhu uye kwakakwirira kudedera. Kana iwe ukanyatsotanga kufunga nezve izvi, iwe unonyanya kukosha.
Yako aura ine ruzivo rwakawanda. Ndiwo ruzivo urwu uyo ​​anodzidziswa aurea muverengi anoshandisa kuverenga yako aura . Muverengi weaurea anobata kuburikidza neaura yake uye 'anoverenga' sekunge irwo ruzivo rwuri mumatanho ako emagetsi. Yako yazvino, yapfuura uye yemberi. Zvakare kubva kuAkashic Makoronike. Izvi zvinowanzozivikanwa se kuverenga kwepfungwa .
Aurareading saka chaizvo zvinogoneka , inogona kutumidzwa nesainzi uye zvakanyanya kukosha kuti uwane. Izvo zvakakosha kuti iyo aurea vein inoshanda nenzira yakachena uye yakatendeseka, uku zvakare ichigadzira kubatana kunoremekedza kubva pamoyo kuenda pamoyo. Tsinga ye aurea inopinda munzvimbo yako yakaoma uye isinganzwisisike, inoera nguva yaunobvumirana. Naizvozvo tevera yako intuition yekuti munhu ari kunzwa mushe here .
Anatomy yako aura
Mazhinji mamodheru akatogadzirwa kuti akwanise kuona iyo aura. Iri zvirokwazvo ibasa rakanaka kwazvo. Mune ese eaya mamodheru, avo vari padyo kwazvo nemasikirwo, akadai seanopenya, anoyevedza kana anoyevedza, vakaona kuti aura yako yakavakwa kubva pamatanho. Mumatanho aya pane misiyano yeruvara rweaura, iyo aura kupenya, iyo aura chimiro, iyo aura density, iyo aura fluidity uye basa reiyo aura . Izvo izvo vanhu vava kuziva zvechokwadi uye izvo zvinogona zvakare kuonekwa nesainzi ndeizvozvo yako aura inosiyana zuva nezuva .
Via aura kutora mifananidzo, semuenzaniso, iwe unogona kuona chaizvo kuti ndeapi mavara ako aura ane panguva iyoyo uye kuti yako yepanyama, yepfungwa uye yemanzwiro bumbiro. Semuenzaniso, kana iwe uri mubishi kutaura iro zuva, rinenge rakabatikana kutenderedza yako nzira dzepanyama dzekutaurirana senge, huro, mhino, nzeve uye maziso ane mavara ebhuruu . Hausi kugadzikana here paganda rako uye zvinonetsa kuti uone kuti chii chaizvo zvisizvo , kushanyira iyo aura mutori wemifananidzo ndiye zano rakanaka.
Kubva pane ruzivo rwakaunganidzwa kusvika zvino, zvinoita sekunge yako aura munda yakaumbwa ne nhurikidzwa nomwe, kana nhanho nomwe . Aya marara akaumbwa neakanyanya chimiro chisina kusimba chemafungu anogara achijeka emapatani, senge rudzi rwekufamba, zvine mvura zvinwiwa :
Chekutanga rukoko; Iyo etheric muviri
Chikamu chechipiri; Muviri unonzwa
Chechitatu rukoko; Muviri wepfungwa
Chikamu chechina; Muviri weastral
Chechishanu rukoko; Iyo etheric causal muviri
Chitanhatu chechitanhatu; Muviri wepamoyo wese
Chikamu chechinomwe; Iyo ketheric causal muviri
Muviri wekutanga, wako etheric muviri - we ether - inobatanidza nyaya uye simba .
Muviri unonzwa kana muviri usinganzwisisike muviri wako wechipiri uye inotevera yako etheric muviri . Izvi zvinodaidzwa izvozvo nekuti zvakabatana nemanzwiro ako.
Muviri wepfungwa, wako wechitatu muviri wakaderera, inoputira muviri wepamoyo uye inoumbwa nezvakanaka zvinhu . Imwe yeiwo inosangana zvakananga nepfungwa dzako uye maitiro epfungwa. Izvi zvinowanzo kuwandisa. 'Basa guru' rinowanzo kukunda munharaunda yedu yekumadokero.
Kuburikidza nemuviri wako weastral - yechina rukoko - unopfuura nyika yepanyama uye unoguma mune nyika dzakazara nezvakavanzika, asi kwete zvakare. Isu tinotaura nezve masimba ezvisikwa kana hunhu hwako. Ikoko, kupanana kunoitika pakati pevanhu. Izvi, hongu, padanho rinonakidza, asi zvakare kwete. Paunongonzwa kusagadzikana nemumwe munhu mukamuri, semuenzaniso, imuviri wako weastral waunoda kuti ubudirire.
Iyo etheric causal muviri, yechishanu layer, iri inoumbwa nemhando dzese dziripo zvakare padanho remuviri uye saka iri mhando yematrice yemuviri wako wenyama.
Rukoko wechitanhatu ndiye iyo yerudo rwepasi rose muviri uye inobatana yakanangana nemweya werudo simba . Rinoenderera uye risingapindike pasirese rudo rudo runoyerera kuburikidza neiyi nhete. Unogona kufunga izvi? Uri rudo!
Chekupedzisira, iyo ketheric causal muviri, wechinomwe layer unosanganisira iyo yose kuziva . Iwe haugone kuwana chero padhuze nesimba reVamwari . Iwe unobva wava mumwe neMusiki.
Chikamu chega chega chakabatana uye chinopinda zvizere nechetatu inotevera , izvo zvivakwa uye zvakaita semvura zvine hue uye zvinowedzerana zvakare kuita yakazara.Yese nhete uye yega yega lightweight inokuita iwe izere izere, uko zvese zvakabatanawo. Zvirokwazvo kubva pakuona kwesainzi, hwese hwese hunogona kuoneka sekudengenyeka, kufamba kunochengeta matete ese manomwe achifamba. Kunge tambo yedandemutande. Kana tambo ikashaikwa kana kusashanda mushe, chimiro chakakosha uye chakanakisa chebanga chinopera simba .
Zvese zvine hungwaru zvakavakirwa matura eura zvinoratidza mafomu epanyama enhengo dzemuviri iwe semunhu zvakare une. Nekudaro, izvi zvakavakwa uye zvine mwenje wakanaka kwazvo. Kubudikidza neizvi inoyerera isina kumisidzana uye yakatwasuka kuyerera kwesimba, iyo inokwira nekudzika kuburikidza uye pamwe nemutsipa wako wesipinha uye vertebrae . Iwe unokwiza musana wako kuburikidza nemweya wako. Iri simba rinodhonza rinodaidzwawo kunzi Chi uye rinoyerera nekumhanyisa kwemweya wako uye kufema.
Ndicho chikonzero nei zvichikosha kuti iwe ufeme zvakanaka mukati mezasi kwedumbu rako. Uine mweya wega wega waunofema kuburikidza nekorona yako, iro simba rehupenyu kana Chi uye zvakakosha kuti simba iri rinosvikawo mune yako yepasi chakra, chakra yako chakra - nzvimbo iri pazasi pemimba yako. Unodzora hupenyu hwako simba kuburikidza nekufema kwako uye nekudaro futi yako aura .
Iwe une pfungwa here yekuti hausi kufema zvakanaka uye kuti mweya wako wakanyanya pamusoro kana hauburuke pasi pazasi peguvhu rako, ipapo mweya wekufema izano rakanakisa .Iwe unodzidza kuona zvakare kuti muviri wako wese unofema uye kuti unogona kutumira mweya wako kune ese nhengo yemuviri wako kuburikidza nepfungwa dzako, kuti kuzorodza kwakakwana kwemuviri, mweya nemweya zviitike. Zvinonzi zvakare izvozvo kufema kwakanaka zvinoreva kujekeswa kwemweya wako . Simba rekuporesa rekufema kudya kwemweya wako, kuporesa yako aura uye kunyatsokuunza mukuyera.
Kana uchikwanisa kunyange fungidzira iwe pachako, zvawakagadzirwa uye zvauri chaizvo, uchaona hupenyu , nharaunda yako, zvakasikwa uye matambudziko ako nemaziso akasiyana kwazvo . Ita sarudzo yemafungiro uye hauzombozvidemba.
Manenji haasi kupesana nezvakasikwa, asi zvinopesana chete nezvatinoziva nezve zvakasikwa. St. Augustine
Dzidza kutaura nemushakabvu: Vanhu vazhinji vachiri…
MIVARA YAAURA, ZVINOREVEI?